LALANA MIFEHY NY TETIBOLAM-PANJAKANA TAONA 2020: Nankatoavin’ny mpikambana eto anivon’ny Antenimierandoholona fanindroany ny volavolan-dalàna laharana faha 05/2019 tamin’ny 30 oktobra 2019 nasiam-panitsiana. – Sénat de Madagascar
December 14, 2019 RAMBELO Abel NIRINA
Rehefa niverina teto anivon’ny Antenimierandoholona mba hodinihana fanindroany ny volavolan-dalàna laharana faha 05/2019 tamin’ny 30 oktobra 2019 mifehy ny tetibolam-panjakana taona 2020 nasiam-panitsiana dia nankatoavin’ny mpikambana eto anivon’ny Antenimierandoholona fanindroany izany volavolan-dalàna izany ny Zoma 13 novambra 2019 tamin’ny 10 ora alina. Notazomina ny fanitsiana nentin’ny fanapahan-kevitra ny Alakamisy 12 desambra 2019.
Tsiahivina fa ireto avy ireo fanitsiana ireo :
– Fampidinana ho dimy isan’arivo ny tahan’ny vola fandrotsaka (acompte amin’ny IR na IS mikasika ny raharaha fanondranana entana rehetra.
– Fanafoanana ny andininy mikasika ilay TVA roapolo isanjato (20%) takiana amin’ny katsaka sy ny sakafom-biby ary ny faikan’entana hafa satria miteraka olana goavana amin’ireo mpiantsehatra amin’ny tontolo ambanivohitra ary averina folo isan-jato (10%) toy ny teo aloha.
– Fampitomboana ny tahan’ny hetra tsy mivantana alaina amin’ny fandaniana (droit d’accises) mikasika ny fanafarana sigara sy alikaola sy ny vokatra misy alikaola sy paraky ho famenoana ny fidiram-bola mifanaraka amin’izay voalaza etsy ambony.
– Fametrahana ny tahan’ny haba amin’ny tataom-bidy (TVA) roapolo isan-jato (20%) takiana amin’ny “bondillons” ihany.
– Ny famerenana ho 34,9 miliara ariary ny tetibolan’ny Antenimierandoholona, mba hifanaraka amin’ny voalaza tao anatin’ny taratasy voalohany nalefan’ny Minisiteran’ny Toekarena sy ny vola mitondra ny laharana faha 201-2019- MEF/SG/DGFAG/DB/FSB-4 tamin’ny 09 oktobra 2019 mikasika ny “élaboration de la loi de finances pour 2020” sy indrindra mba ahafahany manatanteraka antsakany sy andavany ny andraikiny araka ny voalazan’ny Lalam-panorenana.
– Fanesorana ilay Fonds souverain mitentina 200 milliards d’ariary, satria tsy mazava hoe inona ny hampiasana io sorabola io. Mila apetraka aloha ny lalàna hifehezany izany, izay mbola tsy maintsy handalo fankatoavana eo anivon’ny filankevitry ny Governemanta sy Ministra ary ny Antenimiera.
– fanafoanana ny “Régime économique” omen’ny faditseranana ireo orinasa manafatra entana eto Madagasikara anisany amin’izany ny concessionaires de voitures, satria miendrika ho fametrahana favoritisme.
– Fanafoanana ny tetibola natokana ho an’ny fifidianana sénateur
– Famerenana ny fanampiana ara-bola hanohanana ny orinasa JIRAMA (255.0 miliara ariary) satria mbola ao anatin’ny transition énergétique isika amin’izao fotoana izao mba hitsinjovana ny vahoaka amin’ny mety ho fahatapahan’ny jiro sy rano matetika.
Raha fehezina moa izany dia naverina tsy nisy nanalàna no tsy nisy nanampiana ny fanitsiana.
Nampatsiahy ny Filohan’ny Antenimierandoholona fa ny fitadiavana ny tombotsoan’ny vahoaka Malagasy no tena laharam-pahamehana amin’ny fitondrana ny Firenena.
Marihina fa mbola hiverina eny amin’ny Antenimieram-pirenena io volavolan-dalana io.
« Ao anatin’ny fivoriana tanteraka ny mpikambana eto amin’ny Antenimierandoholona.
LALANA MIFEHY NY TETIBOLAM-PANJAKANA TAONA 2020 NASIAM-PANITSIANA : TSY NORAISIN’NY TENY AMIN’NY ANTENIMIERAM-PIRENENA »